Raysal Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Ahmed Oo Ka Digay Dagaal Ka Dhex Qarxa Itoobiya Iyo Masar - Borama News Network
Raysal Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Ahmed Oo Ka Digay Dagaal Ka Dhex Qarxa Itoobiya Iyo Masar
Raysal wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed oo ka hadlaya muranka biyeed ee kala dhexeeya dalka Masar ayaa sheegay in dagaal lawada-galo uusan xal noqoneyn, loona baahan yahay in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo.
Abiye ayaa sheegay in hadii taasi ay suurtoobi waydo uu dalkiisu hayo malaayiin dhalinyara ah oo “dagaal geli karta“.
Raysal wasaaraha oo maanta [ Arbaco ] hortagay baarlamaanka dalkiisa ayaa arrimaha wax laga weydiiyay waxaa ka mi ah xiisadda Masar iyo Itoobiya ka dhex taagan, xorriyadda saxaafadda, dorashooyinka, nidaamka federaalka, arrima la xidhiidha siyaasadda iyo bulshada Itoobiya.
Dr Abiy Axmed oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey xaaladda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee la xiriirta muranka ka dhashay biya xireenka weyn ee ay Ethiopia ka dhiseyso wabiga Nile wuxuu ku jawaabay in ” shacabka Ethiopia aysan dooneyn in waxyeello ay u geystaan shacabka Masar, in ay wax taraan mooyee“.
“Dowladda Itoobiyana waa la mid. Annaga iyo Masar arrimo siyaasadeed oo aan ka wada hadleyno haba yaraatee ma jiraan. Madaxweyne Sisi dhawaan ayaan wada hadalnay maalmaha so socda barri ama saad dambe inaan kulanno ayaan rajeeynayaa inaan ka wadahadalno wixii ay dhibsadeen.”
“Arrinta kale ee sheegesyo in tallaabba aan qaadeyno, sida aad la socotaan shacabka Itoobiya, dal dibadba, waxaan si xushmad leh ugu sheegayaa in afatrii qofba uu mid sabool yahay, waana dhalinyaro, marka xataa haddii Afrika inaan la dagaallanno u baahanno malaayiin ayaan dagaal gelin karnaa.
” Dagaalku xal ma aha, dagaalka Masar-na ma anfacayo, Suudaan-na ma anfacayo, innagana nama anfacayo. Balse haddii ay arrintu tagto jiritaanka dalka iyo calanka, xataa aniga ayaa galayo dagaalka. Wax faa’iida ah lagama helayo, fikirka noocaasi ma aha mid wanaagsan, waxaa wanaagsan in la wada fariisto oo la wada hadlo.”
“Si kastaba ha ahaatee waxaan idiin sheegayaa ineysan jirin cid Itoobiya ka hor istaagi karto iney biya xireen dhisato,” ayuu yidhi Raysal wasaare Abiy Axmed.
Ciidamada Maraykanka Ee Ka Soo Baxay Suuriya Oo Loo Diiday In Ay Ciraaq Galaan Iyo Xaaladooda Oo Halis Ku Sugan
Hibo Nuura Oo Tacsi U Dirtay Caruurtii iyo Asxaabtii Marxuum Caydaruus Uurdoox
Rag Lagu Soo Eedeeyay Alshabaab Oo Fulinjiray Dilal Qorshaysan Oo Maanta Maxkamada La Soo Taagay
DAAWO SIDII LOO DILAY HOGAAMIYiHii ISIS Abu Baker Al Baqdaadi
Mustafehaji October 31, 2019 October 31, 2019
Cabdirashiid Riyo Raac Muxuu Ka Yidhi Diidmada Mucaaridka?
Ciidamada Xooga Dalka Somaliyeed Oo Hawlgali Ka Bilaabay Gobolka...